Qoyska reer Boqor ee Britain oo ku soo biiray wiilka 3aad ee Dhaxal Sugaha ah.
Tuesday July 23, 2013 TWITTER FACEBOOK PRINT THIS PAGE SEND TO YOUR FRIEND
Kate Middletown oo ah xaaska Amiir William yaa wiil ku dhashay Isbitaalka St Mary's ee Galbeedka London. Wiilka yar ayaa noqonaya qofka saddexaad ee yeellan doona dhaxalka Boqortooyada Britain.
iilkan ayaa dhashay saacaddu markay ahayd 4.24 galabnimo ee xilliga London, wuxuuna culeyskiisu ahaa 3.8 killo.
Boqortooyada Britain ayaa sheegtay in wiilka iyo hooyadiis ay caafimaad qabaan. Isitaalka uu wiilku ku dhashay ee ST Mary's ayaa waa isla isbitaalkii ay ku dhasheen wiilka aabihiin Amiir William iyo adeerkii Amiir Harry.
Boqortooyada Britain iyo guud ahaan dadka reer Britain ayaa si weyn u soo dhaweeyay wiilka u dhashay William iyo Kate.
Hadal kooban oo ka soo baxay qasriga boqortooyada Britain ayaa lagu sheegay in wiil uu u dhashay saacaddu markay ahayd 4.24pm ee waqtiga Ingiriiska..
Hadalka ayaa lagu sheegay in wiilka iyo hooyadiis Kate ay caafimaad qabaan hadda isla markaana ay Xalay baryeen doonaan isbitaalka.
Amiir William ayaa la sheegay inuu dhinac joogay xaaskiisa Kate markii ilmuhu dhalanayay. Waxa uu sheegay in isaga iyo xaaskiisa ay aad ugu farxeen, isla markaana ay u tahay waqti gaar ah oo aad ugu weyn. iyadoo la filayo in dhowaan lagu soo bandhigo canugaas yar qasriga boqortooyada sida caadada ah, halkaasoo dadweyne fara badan ay isugu imaan doonaan.
Raiisul wasaaraha UK, David Cameron oo isna ka hadlay dhalshada ayaa sheegay in war lagu farxo uu yahay isla markaana dalka oo dhan in ay dadka u dabaaldegi doonaan oo ay u hambalyeyn doonaan lamaanaha.
Siyaasiyiin badan ayaa sidoo kale u hambalyeeyay boqortooyada Ingiriiska.
Wiilkan dhashayayaa waxa uu noqonayaa qofka saddexaad ee leh dhaxalka Boqoryooyada Britain.
Dad badan oo faraxsan ayaa isugu soo baxay isbitaalka uu ku dhashay wiilkan reer Boqor oo u dabaaldegaya, sidoo kale waxaa dad kale oo badan ay hor dhooban yihiin aqalka Boqortooyada iyaga oo ku faraxsan.
Warbaahinta dalka Britain ayaa aad u hadal heysa dhalashada wiilka ku soo biiray reer Boqor, iyadoo tan iyo shalay markii isbitaalka la dhigay Kate markii ay foolaneysay ay wariyeyaashu ay saldhigteen banaanka hore ee Isbitaalka.